Matanho Mashanu Aunogona Kutora Nhasi Kuti Uwedzere Yako Amazon Sales | Martech Zone
Mwaka wekutenga uchangoburwa waive weatypical. Munguva yedenda renhoroondo, vatengesi vakasiya zvitoro zvezvidhinha-nedhaka mumapoka, neBlack Friday tsoka traffic. kuderera neinopfuura 50% gore-negore. Kusiyana neizvi, kutengesa kwepamhepo kwakawedzera, kunyanya kuAmazon. Muna 2020, hofori yepamhepo yakashuma kuti vatengesi vakazvimiririra papuratifomu yavo vakafambisa $4.8 miriyoni zvekutengesa paBlack Friday uye Cyber ​​Monday - kumusoro 60% pamusoro pegore rapfuura.
Kunyangwe hupenyu huchidzokera kune zvakajairika muUnited States, hapana chinoratidza kuti vatengesi vachaungana vachidzokera kumashopu nezvitoro zvezvitoro nekuda kwechiitiko. Zvinowanzoitika kuti tsika dzevatengi dzakachinja zvachose, uye vanozotendeukira kuAmazon kune yakawanda yekutenga kwavo. Sezvo vatengesi kwese kwese vanotanga kuronga marongero egore rino, iyi puratifomu inofanirwa kuita basa repakati.
Kutengesa PaAmazon Kwakakosha
Gore rakapera, inopfuura hafu yezvese e-commerce kutengesa zvakapfuura kuburikidza neAmazon.
PYMNTS, Amazon uye Walmart Dzave Kuda Kusungwa MuGore Rakazara Rokutengesa Kutengesa
Iko kutonga kwemusika kunoreva kuti vatengesi vepamhepo vanofanirwa kuchengetedza kuvapo pachikuva kuti vatorezve mamwe eiyo traffic (uye mari) yavangazorasikirwa nayo. Nekudaro, kutengesa paAmazon kunouya nemitengo uye yakasarudzika misoro, kudzivirira vatengesi vazhinji kuona mhedzisiro yavanoda. Mabhizinesi anofanirwa kuita kuti chirongwa chavo chemutambo chigadziriswe pachine nguva kuti vakwikwidze mumusika weAmazon. Neraki, kune matanho ekongiri aunogona kutora nhasi anozosimudzira yako Amazon kutengesa:
Danho 1: Natsiridza Hupo Hwako
Nzvimbo yakanaka yekutanga chirongwa ichi nekubvumira zvigadzirwa zvako kupenya. Kana iwe usati watogadzira yako Amazon chitoro, iyi inhanho yakakosha yekutanga. Chitoro chako cheAmazon chakanyanya diki webhusaiti mukati meAmazon yakakura ecosystem kwaunogona kuratidza yako yese chigadzirwa mutsara uye uwane mitsva yekutengesa-yekutengesa uye upsell mikana nevashandisi vanowana yako brand. Nekuvaka yako saiti yeAmazon, iwe unenge wakagadzirirawo kutora mukana wezvitsva zvigadzirwa uye maficha pazvinobuda.
Panguva imwecheteyo, iwe unofanirwa kutarisa nezvekuvandudza kana kuita zveA+ zvemukati kune ako ese Amazon zvinyorwa, izvo zvinorema-inorema maficha pamapeji ezve chigadzirwa. Zvigadzirwa zvako zvichange zvichibata ziso neA+ zvemukati munzvimbo uye zvine zvakawanda zvekuenderana kwemhando yekunzwa. Iwe uchaonawo kukwidziridzwa kwemitengo yekushandura inoita kuti iyo yekuwedzera kuyedza ikwane nguva yako.
Nhanho 2: Ita Kuti Zvigadzirwa Zvako Zviwedzere Kutengeka
Nepo kuita kuti zvigadzirwa zvako zvitaridzike zvakanaka kwakakosha, iwe zvakare unoda kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvako zvinotengwa zvakanyanya kune vashandisi veAmazon. Kuti uite izvi, tarisa kechipiri kuti wakaronga sei zvigadzirwa zvako.
Vamwe vatengesi veAmazon vanosarudza kunyora zvigadzirwa zvine maitiro akasiyana (taura ruvara kana saizi) sezvigadzirwa zvega. Saka, iyo diki tangi yegirini yepamusoro yaunotengesa ingave chimwe chigadzirwa pane imwechete tangi yepamusoro muhukuru hukuru kana ruvara rutsvuku. Pane mabhenefiti kune iyi nzira, asi haina kunyanya kushandisa-inoshamwaridzika. Pane kudaro, edza kushandisa hukama hwemubereki nemwana kuunganidza zvigadzirwa pamwechete, kuti zvikwanise kutariswa. Nenzira iyo, kana mushandisi awana tangi yako yepamusoro, vanogona kushandura zviri nyore pakati pemavara aripo uye saizi pane imwechete peji kusvika vawana chaizvo zvavanoda.
Iwe unogona zvakare kuongorora zvinyorwa zvechigadzirwa chako kuti ugone kuti zvinozoonekwa sei mumibairo yekutsvaga. Amazon hairatidze chigadzirwa kunze kwekunge ichiisa mazwi ese ekutsvaga kumwe kunhu mune rondedzero yechigadzirwa. Uine izvo mupfungwa, iwe unofanirwa kusanganisira zvese zvaunoziva nezve zvigadzirwa zvako uye maficha azvo, pamwe neakakodzera mazwi ekutsvaga, kukwidziridza mazita echigadzirwa chako, backend keywords, tsananguro uye bullet point. Nenzira iyo, zvigadzirwa zvako zvinonyanya kuoneka mukutsvaga. Heino matipi emukati: kuti vanhu vanotsvaga sei chigadzirwa chako chinoshanduka zvichienderana nemwaka. Saka, ive shuwa yekuvandudza yako rondedzero kutora mukana wemwaka maitiro.
Nhanho 3: Tanga Kuedza Zvishandiso Zvitsva Zvekushambadza
Kana uchinge wagonesa zvigadzirwa zvako, tanga kuyedza zvigadzirwa zvitsva zvekushambadzira uye maficha kuti uzviise pamberi pevatengi vakakodzera. Semuyenzaniso, iwe zvino unogona kushandisa anotsigirwa ads kuratidza kunanga vateereri zvichienderana nekutenga kwavo data. Aya ads anoratidza pamapeji ezve chigadzirwa kuitira kuti iwe ugone kukwikwidza zvakananga nezvigadzirwa zvakafanana, uye ivo vanogonawo kuoneka paAmazon peji repamba. Bhonasi hombe kune aya ads nderekuti anoratidzwa paAmazon Display Network, ari ads anotevera vashandisi painternet.
Amazon zvakare ichangobva kuburitsa yakatsigirwa mhando yevhidhiyo ads. Iri boka idzva rekushambadza rinonyanya kunakidza nekuti vazhinji vashandisi veAmazon havasati vamboona vhidhiyo ichibuda, zvichiita kuti vatarise maziso zvakanyanya. Ivo zvakare vanopa yekutanga-peji yekuisa, iyo yakakosha kana uchifunga izvozvo 40% yevatengi havana kumbobvira vapfuura peji rekutanga vanovhura. Parizvino, vanhu vashoma vari kushandisa zviziviso izvi, saka mutengo-pa-kudzvanya wakaderera zvakanyanya.
Nhanho 4: Gadzirisa paKusimudzira Kwako Kwemwaka
Kukwidziridzwa kwakakodzera kunogona kuve mutsauko mukushandura ad-yakagadzirwa traffic kuita shanduko. Kana uchizopa kushambadza, zvakakosha kuti uvhare izvo zvinhu kare nekuti Amazon inoda chiziviso chepamberi kuti igadzirise nenguva… kunyanya yeBlack Friday neCyber ​​5. Kukwidziridzwa chinhu chine hunyanzvi uye hachishande kune wese. bhizinesi kana chigadzirwa. Nekudaro, imwe inoshanda yeAmazon yekusimudzira zano kugadzira chaiwo masumbu anosunga zvine hukama zvigadzirwa pamwechete. Haisi chete kuti zano iri rinobatsira kuyambuka-kutengesa uye kusimudzira zvinhu zvakafanana, asi iwe unogona zvakare kuishandisa kuwedzera kuoneka kwezvitsva zvigadzirwa izvo zvisina kumira zvakanaka.
Nhanho 5: Ongorora Amazon Posts
Nhanho yekupedzisira yaunogona kutora kuti uwane kusvetukira pakutengesa kweAmazon kugadzira yako Amazon Zvinyorwa kuvapo. Iyo kambani inogara ichitsvaga nzira nyowani dzekuchengeta vashandisi pasaiti kwenguva yakareba, saka yatanga kuyedza nedivi rekushamwaridzana kutenga. Zvigadzirwa zvinovaka mapeji uye kutumira zvakanyanya sezvavaizoita pane mamwe masocial media mapuratifomu. Vashandisi vanogona zvakare kutevera avo vavanofarira mabhureki.
Chii chinoita kuti Amazon Posts inakidze ndechekuti ivo vanoratidza pamapeji ezve chigadzirwa mapeji uye anokwikwidza chigadzirwa mapeji. Kuonekwa uku kunovaita chishandiso chikuru chekuwedzera kuratidzwa kune yako brand uye zvigadzirwa. Mumwedzi inotungamira kune kukwidziridzwa kwako, edza kuyedza akasiyana mifananidzo uye mameseji kuti uone zvinoita. Unogona kutanga maitiro aya nekukurumidza uye nemazvo nekudzokorodza zvinyorwa zvauri kutoshandisa pa Instagram ne Facebook.
Ndinovimba tese tichanakidzwa gore rino tisina kushushikana uye kusagadzikana kwatakasangana nako gore rapfuura. Nekudaro, zvisinei kuti chii chinoitika, isu tinoziva kuti vatengi vanowedzera kutendeukira kuAmazon kune zvavanoda zvekutenga. Ndosaka uchifanira kuisa iyi chikuva pamberi-uye-pakati paunotanga kugadzira yako yekusimudzira nzira. Nekuita rimwe basa rakarongeka ikozvino, iwe unenge uri munzvimbo yakanaka yekuona yako yakabudirira zvikuru mwaka paAmazon.
Tags: amazon adsamazon kushambadziraamazon postamazon promotionsamazon kutengesaboost seo salescyber mondaye-zvokutengeseranapymnts